IPhone marara ndeye goldmine yeApple | IPhone nhau
Kana zvese zvishandiso uye smartwatches zvikasashanda, Apple inogona kunge iine ramangwana rakabudirira mune zvemari mu iPhone kushandisazve.
Iyo kambani yakaburitsa gwaro rayo regore rezvakatipoteredza, iro rinofukidza gore rese ra2015. Kunyange hazvo chinhu chose chiri chinakidza, isu takatanga kunyatsoteerera kune chikamu icho kambani inogovana huwandu hwezvinhu zvakadzoserwa kubva kune zvishandiswazve iPhones, ichi chinoenderana neyekugadzirisazve chirongwa sekambani; asi zvakare inosanganisira iPads, Apple Watch, uye zvimwe zvese zvishandiso zvakatumirwa nevanhu kuti zvishandiswezve.
Apple anodaro akawanazve anopfuura mamirioni makumi manomwe emamirioni echinhu, uye pamutengo wanhasi, zvakakosha kuti uzive kuti ivo vanopfuura $ 50 mamirioni.
Ndarama ndiyo yega inokosha mari inosvika zviuru makumi mana zvemadhora, sezvakataurwa neBusiness Insider. Asi pane kuda kuziva nezve zvimwe zvese zvinhu, saka tinopa aya manhamba kuburikidza nemitengo yanhasi yesimbi (yakabvunzwa muna Kubvumbi 14) kuti tione kuti vamwe hupfumi Apple huri kuwana hwayo hwekushandisa zvakare. Heino rondedzero (yakaratidzwa mumadhora):
Mhangura - $ 6,4 mamirioni
Aluminium - $ 3.2 mamirioni
Sirivheri - $ 1.6 mamirioni
Nickel - $ 160.426
Zinc - $ 109.503
Tungamira - $ 33.999
Ehezve, hapana chimwe cheaya manhamba chiri 40 mamirioni emadhora, asi zvese zvinowedzera.
Ehezve, hazvisi zvekuti Apple iri kutengesa zvinhu izvi kune mamwe makambani kana kuzvitengesa pamusika mutema (isu hatitarisiri kudaro), zvinowanzo shandiswazve sezvavanogona pazvishandiso zvitsva.
"Muna 2015, makirogiramu anosvika mamirioni makumi mana e-tsvina akaunganidzwa kuburikidza nezvirongwa zvedu zvekushandisa patsva," anodaro Apple. "Ndiyo 40 muzana yehuremu hwese hwezvinhu zvatakatengesa makore manomwe apfuura."
Nhau dzekutanga dzekushandisazve chirongwa pane ichangoburwa bhizinesi chiitiko, apo Apple yakaunza yayo inoshanda zvinoshamisa (uye zvishoma zvinotyisa) iPhone yekudzokorora robhoti, Liam, kunyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » IPhone marara ndeye goldmine yeApple